अघोरीबाबा प्रेममा चुर्लुम्म डुवेपछि…. | NepalDut
कार्तिक ४ गते २०७६
अघोरीबाबा प्रेममा चुर्लुम्म डुवेपछि….
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका एक अघोरी बाबाले विवाह गरेपछि एकाएक फेरि सामाजिक संजालको माहोल तातिएको छ ।
बाबाको विवाहलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी हुँदै आएको छ । कतिले सकरात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने धेरैले अघोरी बाबाले विवाह गर्नु नकारात्मक भएको बताएका छन् ।
योसँगै अघोरी बाबाको विवाह बारेमा उर्लाबारी ७ का जङ्गि बाबा जङ्गिएका छन । मोरङको उर्लाबारी–८ स्थित पाथीभरा मन्दिरमा बस्दै आएका जङ्गी बाबा चर्चामा छन् ।
२ सय भन्दा बढी योग आशन गर्ने जङ्गी बाबा यतिबेला मिडियाको नजरमा परेका हुन् । अहिले दैनिक जसो आधा दर्जन मिडिया तथा यूट्यूब च्यानलहरुलाई अन्तरवार्ता दिँदै आएका छन् ।
उनले भन्छन्, ‘योगको ज्ञान बाँड्छु, चर्चामा आउनु छैन ।’ उनले आफूलाई लोभलालच नभएको र सन्यासी जीवनमै खुशी रहेको बताए ।
प्रेम, विवाह र यौनका बिषयमा पनि उनले आफ्नो धारणा छुट्टै रहेको बताए । क्षणिक सुख र मोज मस्तीमा नभई आध्यात्मिक ज्ञान, योग र सन्यासीमा जीवन ब्यतित गर्ने सोचाईमा पुगिसकेको उनको भनाई छ । उनले चाँडै योग ज्ञान शिबिर सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
उनले अघोरी बाबालाई पागल भएको सबै बाबाहरुको बेइज्जत गरेको र बाबाप्रतिको सम्मानलाई माटोमा मिलायो भन्दै अघोरीको भबिष्यबाणी समेत गरेका छन् । उनले “अघोरी पागलले विवाह गर्‍यो अब चाडै हत्या गर्छ अनि सर्बनास हुन्छ” भनेका छन् ।
युट्युवमार्फत चर्चामा आएका अघोरी बाबाले धेरै अन्तरबार्ता दिने गरेका थिए । अरुभन्दा छुट्टै किसिमले बोल्ने शैलीले उनिले निकै नै चर्चा कमाए ।
हरेक कुरालाई फरक किसिमले बताउने बाबाले जीवन दर्शन भुतप्रेत संगसंगै बसेको आत्मा अनि चुडेलसंग माया पिरती गासेको जस्ता फरक कुराले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएको थियो ।
केटि भनेको पतुर्नी हुन्छन् यिनिहरुको नजिक जानू हुदैन लाइफ ड्यामेज हुन्छ भनेर बिभिन्न अन्तरबार्तामा भन्ने बाबाले अहिले विवाह गरेको भिडियो आएपछि अनि भिडियोमा नारी शृटिकर्ता हुन नारीबिना संसार चल्दैन भन्ने कुरा गरेपछि सबै अचम्ममा परेका छन ।
अघोरीले बिहे गरेपछि प्रेमलाई नारायणी झैँ अविरल बगेको नदीजस्तै भएका बताएका छन् । उनले आफ्नो अहिलेसम्म लाइफ ड्यामेज भएको र अब भने लाइफ म्यानेज भएको बताएका थिए ।
उनले ऋषिमुनिले जस्तै आफूले पनि जोडी पाएको भन्दै भगवानको ‘उपहार’ का रुपमा लिएो सुनाए । साथै उनकी श्रीमतीले भाइरल बाबाका युट्युबमा अन्तर्वार्ता हेरेर मन पराएको र खोज्दै आफै भेट्न गएको बताइन् । उनले पनि यो जोडीलाई भगवानले दिएको उपहारका रुपमा लिएकी बताइन् ।
जङ्गि बाबाले अघोरीलाई अब तह लगाउन जङ्गि बाबा तयार भैसकेको बताए । अब अघोरीलाई कार्बाही गर्ने र मानसिक अस्पताल भर्ना गराउने समेत ठाडो चुनौती दिएका छन ।